Mohamed Salah oo wajahaya abaarta goolal la’aaneed ee ugu dheer Kooxda Liverpool
Home Horyaalka Ingiriiska Mohamed Salah oo wajahaya abaarta goolal la’aaneed ee ugu dheer Kooxda Liverpool
Mohamed Salah ayaa laga yaabaa inuu ciyaaro todobo kulan oo Premier League ah isagoo aan wax gool ah u dhalin Liverpool markii ugu horeysay abid marka Reds maanta kuka laciyaareyso West Ham United caasimada.
Kooxda heysata horyaalka Jurgen Klopp ayaan shabaqa soo taaban afar kulan oo horyaalka ah ka hor inta aysan la ciyaarin Tottenham Hotspur, oo ay ku guuleysteen inay garaacaan 3-1 bartamihii isbuuca si ay u soo afjaraan rikoorkooda xumaa.
Si kastaba ha ahaatee, Salah ayaan ka mid ahayn gooldhaliyeyaasha ugu danbeeyay, taasoo la micno ah inuu durba barbareeyay waayihiisii ​​ugu dheereyd ee lix kulan isagoo aan gool u dhalin Liverpool.
Haddii uu ku guuldareysto inuu jabiyo daafaca Hammers maanta, wuxuu sameyn doonaa rikoor shaqsiyeed oo aan loo baahneyn oo ah todobo kulan oo horyaalka ah isagoo aan wax gool ah dhalin markii ugu horeysay xirfadiisa Anfield.
Salah ayaa durbaba dhaliyay 13 gool oo Premier League ah laakiin markii ugu dambeysay ee uu ku guuleysto horyaalka heerka koowaad intii uu socday kulankii bishii December ee Crystal Palace, inkastoo uu labo jeer shabaqa soo taabtay kulankii ay Reds guuldarrada ka soo gaartay FA Cup ee ay ka qaadeen Manchester United horaantii bishaan.
West Ham ayaa Liverpool kala bixi doonta afarta koox ee ugu sareysa hadii ay ka adkaato kooxda heysata isbuucaan, laakiin Salah ayaa leh toddobo gool toddobadii kulan ee ugu dambeysay ee uu ka horyimid kooxda caasimada ka dhisan.
Previous articleThomas Tuchel oo dalbanaya in loo keeno Erlling Haaland.
Next articleManchester united oo ku dhiban ineey garaacdo kooxaha waaweyn ee EPL.